Obere Ogige Uhie
Home > Ngwaahịa > Obere Ogige Uhie (Total 20 Ngwaahịa maka Obere Ogige Uhie)
Obere Ogige Uhie - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Obere Ogige Uhie manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Obere Ogige Uhie na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Obere Ogige Uhie na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Anyanwụ LED Waterproof Ogige Nsu Lamp Wall Okpu
Tag: Udo Ala Ubi , Uhie n'èzí , Okpokoro Mmiri nke Mmiri
Mmiri nke na-adịghị ahụkebe na-ekpuchi ọkụ ọkụ, ịhụnanya ndụ, hụrụ ya n'anya. Mmiri mmiri na-ekpuchi mmiri . A pụrụ iji oriọna a na-acha ọkụ ọkụ nke anyanwụ a rụọ ọrụ n'ọtụtụ ebe. Igbanye nnukwu ìhè na abalị nwere ike imetụta ụra nwa, na-ezo...
Mbara Igwe Uhie Na-ahụ Maka Ngwá Agha Ngwá Agha
Tag: Ogologo Ochie Ogologo , Na Nchekwa Nche , Compass na Knife
Ike anyanwụ na-enwu ọkụ ọkụ, ma ya na onye na-ahụ maka nchekwa, ọkụ ịdọ aka ná ntị, akụ na-adọrọ mmasị, onye na-egwu ihe, ọrụ nhazi. Ngwurugwu na mma bụ ihe dị mkpa dị na nlanarị nke dị n'èzí, nke bụ ihe ntanetị ọtụtụ ọrụ. Ogologo ọkụ ọkụ . Mgbe...
New Cassette Obere Igwe Ala Ntanye na Nkwupụta Ọdịdị Gosipụtara
Tag: Ngwáigwe Ọhụụ Ọhụụ na-agbanye na Okwu , Ọhụụ Ọhụụ Ọhụụ Ọgbara ọhụrụ , Obere nkwụnye n'ime Ọkà okwu
Ngwaahịa a bụ igbe dị iche iche nke ikuku nke igwe multimedia, ọrụ dị iche iche! Na ọkụ ọkụ mberede! Ọrụ mmepụta ike. Enwere ike iji ya mgbe chaja oge. Ọrụ redio FM. Igwe olu olu dị iche iche! Kaadị TF kwadoro, U disk, kaadị SD, ọrụ ntinye ntị...
Igwe okwu igwe ikuku igwe ikuku nke obere obere ụda
Tag: Ọkà Okwu Bluetooth na-acha ọkụ , Mbara Igwe n'èzí Waterproof Smart Card Speaker , Igwe okwu Bluetooth nke dị elu nke elu igwe
The Solar n'èzí waterproof smart kaadị ọkà okwu adopts Bluetooth 4.2, na njikọ ọzọ bụ anụ. Mfe jikọọ ekwentị mkpanaka, mbadamba, akụrụngwa kọmputa, dị ka igwe egwu na ekwentị, chee echiche banyere egwu ikuku, mgbidi dị mma gbara gburugburu 360...
Ogige Ngwá Agha Na-acha Ncha
Tag: Ụpa Ngbapu Agba , Kọmpat na Ogwe , Enwere ike ịhazi ọkụ ọkụ
Ìhè ma dị mfe ibu. Ike ikpo ọkụ, ogologo ndụ, ihe ngwọta dị irè nke ọma, ọ bụghị ọkụ, ìhè dị nro na enweghị nlele nchedo anya . Ejiji mmiri ozuzo, ihe niile na ihu igwe, jiri gel silica dị ka mgbidi nke na-egbuke egbuke, imepụta ihe mmiri na-adịghị...
10-150W N'èzí Ụzọ Igwe Uhie Na-enwu Uhie
Tag: 10w-120W ìhè nke anyanwụ , Okpokoro Igwe Uhie Na-enwu Anya , Nchekwa Environmental Nchedo
10w-120W Igwe ọkụ dị na mbara igwe na -arụ ọrụ site na kristal kristal kristal, batrị ndị a kwụlitere na valve (batrị colloidal) na-arụ ọrụ na-echekwa ọkụ eletrik, ọkụ oriọna na-ejiri dị ka isi ọkụ, ma na-achịkwa ndị na-achịkwa ma na-ekpuchi ndị...
Obere Ogige Uhie akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Obere Ogige Uhie ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Obere Ogige Uhie kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Obere Ogige Uhie wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.